फूलगोभी र स्याउ संग गाजर सलाद भान्सा व्यंजनहरु
फूलगोभी र स्याउको साथ गाजर सलाद
मारिया vazquez | | Ensaladas, चिसो शुरुआत
संग कंटाएर परम्परागत रसियन सलाद? घर मा हामी यो प्रेम, तर पनि यस जस्तै वैकल्पिक संस्करणहरू सिर्जना फूलगोभी र स्याउको साथ गाजर सलाद। हामीले यसलाई अन्तिम साताको अन्त्यमा तयार गर्‍यौं र हामीलाई यो यति धेरै मनपर्‍यो कि आज मैले तपाईंलाई साझेदारी गरेको छु। के तपाई यसलाई चलाउन हिम्मत गर्नुहुन्छ?
यो रूसी सलाद हल्का र स्फूर्तिदायी छ। फूलगोभी यसको प्रमुख तत्त्व हो, जबकि यसमा प्याज, गाजर, स्याउ र केहि छोला! यदि तपाईं सहि पढ्नुहुन्छ भने, छोला। यी, सलाद को स्थिरता प्रदान को अतिरिक्त, यो अधिक धेरै पूर्ण बनाउँछ।
सलाद तेल र सिरका संग मसिन गर्न सकिन्छ, तथापि म यस पटक मेयोनेज थप्न रुचाएँ। यसले यसको लागि आदर्श बनाउँछ स्यान्डविच र स्यान्डविच तयार गर्नुहोस्, तर कुनै मासु वा माछा डिशको साथीको रूपमा। यसलाई तयार गर्न यसले तपाईंलाई १ minutes मिनेट भन्दा बढी लिन सक्दैन, प्रतिज्ञा गरिएको!
यो फूलगोभी र स्याउ संग गाजर सलाद एक स्यान्डविच को लागि एक भरण को रूप मा आदर्श हो, तर कुनै पनि मासु वा माछा डिश संग संगतको रूपमा।
रेसिपी प्रकार: Ensaladas
खाना पकाउने समय:6m
कुल समय: 21 m
½ ठूला फूलगोभी
पकाइएको छोलाको १ सानो भाँडा (२०० ग्राम)
Car गाजर, ग्रेटेड
१ स्केलियन, काटियो
मेयोनेजको table-। चम्चा
प्रशस्त पानी भएको सासप्यानमा हामी फूलहरूमा फूलगोभी पकाउँछौं Minutes मिनेट वा टेंडर नभएसम्म
जबकि, हामी छोलेको धुने छौं चिसो पानी को धारा अन्तर्गत।
एक पटक धोईएपछि, हामी त्यसलाई भाँडामा राख्छौं र हामी तिनीहरूलाई काँटाले काट्छौं। हामीले तिनीहरूलाई शुद्ध गर्नुपर्दैन, तिनीहरू टुक्राहरू हुनुपर्दछ र त्यहाँ पूरै छोसेको पनी हुन सक्छ।
पछि ग्रेटेड गाजर थप्नुहोस् र प्याज, एक स्याउ र काटिएको फूलगोभी।
सीजन र मिक्स सबै सामग्री।
त्यसपछि, हामी मेयोनेज थप्दछौं र हामी फेरि मिश्रण।
हामी दोस्रो एप्पलले सजावटको फूलगोभी र गाजर सलादको सेवा गर्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » भाँडा » Ensaladas » फूलगोभी र स्याउको साथ गाजर सलाद
फूलगोभी र करी क्रीम
ओभन बिना चकलेट फ्लान